FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA YORKIPOO - ALIKA
Alika mifangaro mifangaro i Yorkshire Terrier / Poodle
Miller the Yorkiepoo amin'ny 1 1/2 taona
Ny Yorkiepoo, antsoina koa hoe Yorkiedoodle na Yo-Yopoo, dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Yorkshire Terrier ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Yorkipoo
Drafitra mpamorona endrika = Yorkie Poo
Misy fomba vitsivitsy samihafa amin'ny famokarana mpiompy Yorkipoos. Anontanio ny mpiompy izay ifandraisanao hoe karazana hybrid inona no ampiasainy.
F1 = 50% Yorkshire Terrier ary 50% Poodle - Ity i Yorkie to Poodle miampita ity dia taranaka voalohany, izay miteraka zaza salama kokoa. Ny karazam-bolo dia mety ho lava toa an'i Yorkie, na mifofofofo toy ny Poodle, ny pups amin'ny fako iray ihany dia mety miovaova.
F1b = 25% Poodle ary 75% Yorkshire Terrier (F1 Yorkipoo sy Yorkie cross) - Ity i Yorkipoo dia naterina tany Yorkie. Ny palitao dia nivadika toa an'i Yorkie. Ity karazana hybrid F1b ity dia nomena anarana Yo-Yopoo.
F1b = 25% Yorkshire Terrier ary 75% Poodle (F1 Yorkipoo sy Poodle hazo fijaliana) - Ity no Yorkipoo niverina tany Poodle. Izy io dia Doodle milomano, olioly, shaggy tena mifanaraka amin'ny karazana palitao.
F2 = F1 Yorkipoo sy F1 Yorkipoo hazo fijaliana - Amin'ity fiarahana ity dia mahazo ny isan-jato mitovy amin'ny fifangaroan'ny Yorkshire Terrier ianao tahaka ny azonao atao ao amin'ny F1 Yorkipoo.
F3 = F2 fiampitana Yorkipoo sy F2 Yorkipoo
Taranaka maro = F3 na Yorkipoo taranaka ambonimbony ary F3 na fiandohana ambony Yorkipoo
Pepper the Yorkipoo lahy amin'ny taona 8 dia Yorkipoo kilasy F1 (Yorkie / Poodle hybrid). Izy koa dia mpilalao efa misotro ronono. Izy dia niseho tamin'ny fizarana 5 an'ny 'Touched by an Angel,' no mpihazakazaka tamin'ny audition an'i 'Joe Camps Benji' ary manana dokambarotra marobe. Niasa tamin'ny sarimihetsika Kevin Costner ihany koa izy. 'Tsy manao zavatra manokana aho izao ... mipetraka eo ambonin'ny ahitra fotsiny.' I Pepper dia maniry ny firariany tsara indrindra hivoaka any Skidboot (ilay Alika Biby malaza aostraliana). Tsy hahita an'ity alika mahafinaritra ity izahay. Tsara be i Skidboot. '
Pepper ny kilasy F1 lahy Yorkipoo (Yorkie / Poodle mix dog) - 'Izy koa dia niseho tamin'ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra tariby teo an-toerana. Tian'ny tompon'ny trano fisakafoanana izy! '
I Chewie dia Yorkipoo kilasy F1b. Izy no sakaizan'i Pepper akaiky indrindra.
Maggie the Yorkipoo (Yorkie / Poodle cross) avy any Brezila 18 taona
Jessie, iray taona ity. Sary natolotry ny Beauté Barbue Bichon Yorkie sy Yorkipoos
Phio ilay volafotsy Yo-Yopoo (izay F1b Yorkipoo = Yorkipoo / Yorkie hybrid) amin'ny faha-15 volana, sary natolotry ny Kennels 3 Pines
Zoi ilay mainty sy mainty Yo-Yopoo (izay F1b Yorkipoo = Yorkipoo / Yorkie mix dog) amin'ny 2½ taona, sary natolotry ny Kennels 3 Pines
Rocky the Yorkipoo avy any New Orleans
'Nanana ny andraikitra maha mpitondra alfa ho an'ny Malik anay izahay. Izay olombelona mamela ny alikany hitantana ny fonosana / fianakaviany dia tsy nanao ny azy Research alohan'ny hanekena ny sakaizany efatra tongotra ho ao an-trano. Malik izany amin'ny 4 volana. '
'Izy dia alika voaofana tsara ary toy izany hatrizay naha puppy azy. Tsy tianay hatsangana ho ' alika am-bohoka mahazatra . ' Maka kilalao amin'ny anarany izy, afaka mamela fitsaboana amin'ny orony ary mivezivezy manodidina ny trano. Indraindray izy dia faly be rehefa mihaona amin'ny olona sy alika vaovao, ka tianay ny mifanerasera aminy matetika. Raha tsy izany dia manana izy toetra tsara be . I Malik io fony izy 2 volana ary tokony ho 2,5 lbs. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Yorkipoo
Yorkipoo Sary Pejy 1
Yorkipoo Sary Pejy 2
Yorkipoo Sary Pejy 3
Boston terrier Cocker spaniel afangaro